Jeebadda lugtu waxeey kamida noqon doontaa ciqaabaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jeebada lugta oo dhalin yaradda lagu cinqaabi doono
Justitieminster Bearrice Ask
Jeebadda lugtu waxeey kamida noqon doontaa ciqaabaha
La daabacay måndag 22 juni 2009 kl 14.09
Wasiirka Cadaaladda ee Iswiidhan Beatrice Ask, ayaa sheegt in ay hirgalin doonto xabsika dibad joogaa ee dhalin yarada. inta la ogyahay dadka waa ween ayaa lagu xiri jirey jeebada lugta, laguna xukumaa xabiska banaan joogaa, kuwaas oo nolol maal meedkooda soo guta waa inta loo qorsheeyaye. Meesha aysan dhaafi karin xuduudyadda laga xanibay.
Wasiirku waxuu sheegay mar uu wareeysi siiyey Jariidada Svd, ineey dhalin yaradu aadi karaan iskooladooda isla markaana ay soo shaqeeysan karaan. Mesha laga xadaday dhaq dhaqaaqa habeenkii iyo maalmaha fasaxaa, taasina aysan lakulmi karin dhalinyaradii ay danbiga wadda gali lahaayeen.
Hindisahaan Wsiiradda Beatrice Ask, iyo qodobo kale oo ku wajahan sharciyadda ayeey dawladu go,aanka gaari doontaa maalinta khamiista.
Waxaana ka soo hor jeestay hindisahan hirgalin xabsika dibad joogaa ee dhalin yarada, gudomiyaha golaka sharciyadda ee baarlamaanka dalkaan Iswiidhan Thomas Boström. Waxuuna u arkaa in qoobka xirku yahay xal u dhigma xabis, caruurna aan la xabisi karin.